War deg deg ah: Al-Shabaab si ka duwan sidii hore uga hadashey dilkii wasiirkii Gudaha – SBC
War deg deg ah: Al-Shabaab si ka duwan sidii hore uga hadashey dilkii wasiirkii Gudaha
Xoogaga Shabaabka ee dagaalka kula jira dawlada FKMG Soomaaliya ayaa bayaan cusub oo saacad ka hor ay soo dhigeen mid ka mid ah baraha Internet-ka ee afkooda ku hadla waxay si ka duwan warkii shaley uga hadleen qaraxii lagu diley wasiirka arimaha gudaha & amniga Qaranka marxuum C/shakuur Sheekh Xasan Faarax.
Bayaankan waxaa lagu sheegay in weerarka qaraxa lagu diley wasiirka uu ahaa qarax bam oo lagu rakibay sariirta qolkiisa gaarka ah, iyadoo ay waa sida bayaanka lagu yiriy’e ay aaseen bambada mujaahidiin sida warka loo dhigey.
Bayaanka waxaa lagu xusey waa sida hadalka loo yiriye in qaarijnta wasiirkii arimaha gudaha & amniga qaranka ay tahay jug soo gaartey wax loogu yeeray murtidiinta,mushrikiinta, xabashida & salabiyiinta sida hadalka loo dhigey iyadoo lagu yiri bayaanka wasiir C/shakuur uu ahaa isku xiraha sida warka lagu xusey mushrikiinta, xukuumada ridada, xabashida & wax loogu yeeray hogaanka qabuuriyiinta oo uu xilkaasi hayo walaalkiis Maxamuud Xasan Faarax.
Bayaankan ka soo baxay kooxda Al-Shabaab ayaa wuxuu wax weyn ka badalan yahay wararkii soo baxay saacadihii ugu horeeyey ee dilka wasiirka arimaha gudaha C/shakuur Sheekh Xasan Faarax, iyadoo markii hore sarkaal ka tirsan xarakada Shabaab uu sheegtey in qaraxaasi ay geysatey sida hadalka uu u dhigey in gabadha isqarxisey ay ka tirsaneyd ciidamadooda.
Lama oga ujeedada dhabta ah ee ka dambeysa wararkan iskhilaafsan ee ka soo baxaya xarakada Shabaabka oo ku aadan qaabka weerarkaasi ay u maleegeen, laakiin guud ahaan waxay sheegteen masuuliyada fulinta & abaabulka warkaasi.
Ma ahan markii ugu horeysay ee kooxdani ay sheegato dilka xubno ka mid ah dawlada KMG ah, waxaana ay horey u sheegteen weeraro qarax ah oo lala beegsadey wasiiro & masuuliyiin ka tirsan dawlada KMG ah kuwaasi oo ay ka mid yihiin, Prof. Ibraahim Xasan Cadow, Qamar Aadan, Saleebaan Colaad Rooble, Axmed Waayeel & Cumar Xaashi Aadan.